Muuri News Network » Dhegeyso: Nabadoon Fanax oo Si Kulul uga hadlay dhibaato ka taagan G/Sh hoose.
Dhegeyso: Nabadoon Fanax oo Si Kulul uga hadlay dhibaato ka taagan G/Sh hoose.
Apr 27, 2016 - Comments off
Iyadoo Maleeshiyada dowlada Muqdisho iyo kuwa Amisom ay weerar Culus ku qaadeen dagmada Janaale Ee G/sh hoose oo ay ku sugnaayeen Al-shabaab una suura gashay inay halkaasi kala wareegaan ayaa hadana waxaa soo baxaya dhaliilo loo jeedinayo qaabka holwgalkaasi loo fuliyay.
Nabadoon Maxamed Cumar Cabdulaahi Fanax oo ka mid ah waxgaradka Shabeelada hoose ayaa oo la soo xariiray war baatinta ayaa sheegay in si qaldan loo wajahay howlgalka ay iska kaashadeen ciidamada Muqdisho Iyo Kuwa Amisom.
Si kastaba ciidanka Amisom ayaa shalay si nabad ah kula wareegay degmada Janaale walow markii dambe ay isaga baxeen waxaana jira in qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka gobolka Shabelaha Hoose ay ku eedey nayaan maaxda dowladda Somaaliya in si qaldan ama wado qaldan ay u mareen qab sashadii degmada Janaale.